Wasiir Bartlett: U hoggaansanaanta adag ee borotokoollada COVID-19 ayaa fure u ah soo-celinta guul-doonka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Wasiir Bartlett: U hoggaansanaanta adag ee borotokoollada COVID-19 ayaa fure u ah soo-celinta guul-doonka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • saaciday inay • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • Dadka • War-Saxaafadeed • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska Edmund Bartlett ayaa sheegay in ilaalinta caafimaadka iyo badqabka muwaadiniinta Jamaica, iyo sidoo kale dadka soo booqda, ay weli tahay mudnaanta koowaad iyada oo jasiiraddu soo dhoweysay guusha guul leh ee soo laabashada hawlgallada badda.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica Edmund Bartlett wuxuu ku baaqayaa in si adag loogu hoggaansamo borotokoolka badbaadada COVID-19.
Sababtoo ah khataraha ay soo bandhigtay COVID-19, tallaabooyin ayaa la qaaday si loo maareeyo dhaqdhaqaaqa rakaabka safarka.
Nidaamka dirista ee la xakameeyey ayaa la hirgaliyay Isniintii.
Wasiirka Dalxiiska, Mudane Edmund Bartlett ayaa sheegay in ilaalinta caafimaadka iyo badbaadada muwaadiniinta Jamaica, iyo sidoo kale booqdayaasha, ay weli tahay mudnaanta koowaad iyada oo jasiiraddu soo dhoweysay guul -darradii soo laabashada hawlgallada maraakiibta shalay (Ogoosto 16).
Hadalka ka dib booqashada Carnival Sunrise ilaa Dekedda Maraakiibta ee Ocho Rios Cruise, Wasiirka Dalxiiska Jamaica Bartlett wuxuu sheegay inuu xusayo walaacyada warbaahinta lala wadaagay ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa xaddidan ee martida soo degtay markabka. Si kastaba ha ahaatee, Mr. Bartlett wuxuu hoosta ka xarriiqayaa in “go’aankan la qaatay ka dib markii lala tashaday daneeyayaal kala duwan oo ay ugu muhiimsanayd, waxaa loo sameeyay si loo hubiyo in si adag loogu hoggaansamo borotokoolka COVID-19 ee ay dejisay Wasaaradda Caafimaadka iyo Fayo-qabka, Xarunta Xakamaynta Cudurrada ee Maraykanka (CDC) iyo la -hawlgalayaasha kale ee caalamiga ah si nabadgelyo ah loogu laabto hawlgallada badda. ”
Wuxuu iftiimiyay khataraha ka dhasha COVID-19 awgeed, waxaa la qaaday tillaabooyin lagu maareynayo dhaqdhaqaaqa rakaabka dalxiiska, taas oo macnaheedu yahay in isbeddel lagu sameeyo howlihii caadiga ahaa ee caadiga ahaa, si loo yareeyo halista. Wuxuu xusay in isbedeladaan lagu wargaliyay daneeyayaasha dalxiiska.
Booqashooyinka jadwalka leh ayaa diyaar u ahaa rakaabka meelaha soo jiidashada leh ee ay xaqiijisay Shirkadda Horumarinta Waxsoosaarka Dalxiiska (TPDCo) inay tahay mid u hoggaansan COVID-19 waxaana booqdayaasha loo kaxeeyay meelaha soo jiidashada leh hawlwadeennada qandaraasleyda maxalliga ah ee Ocho Rios.
“Iyadoo la raacayo tilmaamaha Wasaaradda Caafimaadka iyo hab -maamuusyada caalamiga ah ee ku saabsan ku -noqoshada nabadgelyada ah ee hawlgallada maraakiibta, waxaa la gaaray go'aan ah in lagu daro kaliya meelaha soo jiidashada leh ee la xaqiijiyay in la iibiyo Doonta Carnival Khadadka marka laga reebo in hawlwadeen kasta oo qandaraasle ah uu ku joogsaday mid ka mid ah saddexda suuq ee farsamada gacanta oo kala ah: Ocho Rios, Cananaaska iyo Suuqa Hore, ”ayuu yiri Wasiir Bartlett.
Wuxuu xusay sababta oo ah baaxaddooda xubnaha Suuqa Qumbaha Grove ayaa loo oggolaaday inay ka qaybgalaan suuqa dekedda si ay badeecadooda ugu soo bandhigaan dekedda dalxiiska ee Ocho Rios. Go'aanka lagu joojinayo suuqyada farsamada gacanta, ka hor intaan la aadin meelaha soo jiidashada leh, waxaa oggolaaday Wasaaradda Caafimaadka iyo Fayo -qabka, iyo sidoo kale Ciidanka Dhismaha Jamaica.